Machine fanosotra gorodona
Crystallizer simika fikojakojana vato
Fomba fampiasana ny gorodona multifunctional scrubber amin'ny trano fandraisam-bahiny
avy amin'ny admin tamin'ny 21-04-19
Ny fikosoham-baravarankely misy gorodona amin'ny hotely dia manana endrika ivelany sy faran'izay tsara ary endrika anatiny sy marina. Motera misy rivotra, fanamafisam-peo misy capacitoraire, asa azo antoka sy azo itokisana kokoa, ny ampahan'ny fandefasana dia mampiasa vy vy telo an'ny planeta planeta, famehezana tsara, ...
Nikarakara vaksiny satroboninahitra vaovao ny vondrom-piarahamoninay
Tamin'ny 6 ora sy sasany hariva tamin'ny 14 aprily, nandray anjara tamin'ny vaksinim-boninahitra satro-boninahitra vaovao nomen'ny governemanta aho. Fitsaboana telo no nomena tamin'ny fotoana samihafa. Satria tsy mitovy ny fomba fiasan'ny tsirairay, hafa ihany koa ny fihetsika aorian'ny fanaovana vaksiny. Taorian'ny vaksiny dia natory ny fihetsiko, izaho no ...
Ny orinasa manadio sy manadio isan'andro dia miresaka momba ny fahatsapana ny fanadiovana sy fikolokoloana karipetra
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-04-14
Ny karipetra dia mizara telo amin'ny ankapobeny: volon'ondry madio, landy tena ary fibre simika. Misy fomba fikojakojana maro samy hafa amin'ny karipetra samihafa. Safidio ny mpanadio mety mifanaraka amin'ireto karazana karipetra ireto: mpanadio sombin-javatra maina: Mampiasà boaty mandefasa elektronika matihanina ...
Iza amin'ireo mpanadio banga no tsara ampiasaina? Ahoana no tokony hisafidiako?
avy amin'ny admin tamin'ny 21-04-09
Ankehitriny dia mihamaro ny olona tia miantsena, ka ny fikorianan'ny mpandeha amin'ny toeram-pivarotana sasany dia somary lehibe, ary ny velaran'ny toeram-pivarotana dia lehibe, koa ny haben'ny fanadiovana koa dia lehibe tokoa. Raha miankina amin'ny mpiasa amin'ny fanadiovana fotsiny ianao dia lehibe ny asa, ka ...
Tena fantatrao ve ny mahasoa an'ny mpanadio banga? Ankoatry ny fandroahana dia misy fampiasana majika dimy koa!
Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fampivoarana ny teknolojia sy ny fotoana, dia nihatsara be koa ny kalitaon'ny olona. Tsy toy ny fandaniana amin'ny sakafo intsony ny ankamaroan'ny fandaniana ao an-trano toy ny am-polony taona vitsivitsy lasa izay. Avo mahatsikaiky ny coefficient Engel. Arakaraka ny nahitako fa ny ...
Tsy maintsy takatry ny mpanadio ny fanadiovana sy ny fikojakojana ny karipetra
avy amin'ny admin tamin'ny 21-04-02
Ny trano fandraisam-bahiny sy faritra maro ho an'ny daholobe toa ny efitrano sy lalantsara dia rakotra karipetra. Misy karazana karipetra telo fampiasa matetika, dia ny karipetra fibre simika, karipetra volomparasy ary karipetra mifangaro.
Ahoana ny fomba hanadiovana hotely avo lenta? Ampianaro anao ny dingana sy ny fahaizan'ny fanadiovana karipetra matihanina
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-03-29
Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fivoaran'ny fotoana haingana, ny karipetra dia matetika ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny ankohonana. Ny karipetra dia tsy vitan'ny hoe mampihena ny vovoka entina ao anaty efitrano amin'ny kiraro. Tsy azo odian-tsy hita ny fanadiovana karipetra. Amin'ny ankapobeny, ny trano fandraisam-bahiny na trano fandraisam-bahiny avo lenta dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fanadiovana ...
Ny fitsipi-piasan'ny mpanadio banga hotely Inona avy ireo tombony sy toetra mampiavaka ny fantsom-pahamehana amin'ny hotely
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-03-26
Miaraka amin'ny fivelaran'ny siansa sy ny haitao ary ny fari-piainan'ny olona avo sy avo kokoa, ny fiankinana rehetra dia tsy miankina amin'ny asan'olombelona intsony mba hitandroana ny fahadiovana anatiny sy madio. Ny fisehoan'ny mpanadio banga dia manome fahafaha-manao samihafa amin'ny raharaha fikarakarana trano. Hotely koa dedic ...
Singa fototra takiana amin'ny fitaovana fanadiovana trano fandraisam-bahiny
Ny maha-zava-dehibe ny fisafidianana ny fitaovana fanadiovana: Voalohany, satria fitaovana fanadiovana maro no manana fampiasam-bola lehibe sy androm-piainana maharitra; faharoa, ny fisafidianana ny fitaovana fanadiovana dia mety amin'ny vokatra fanadiovana sy ny fahaizan'ny fikojakojana. Maka hotely ohatra, ny hotely tsirairay dia tokony ...
Inona avy ireo fitaovana fanadiovana ilain'ny hotely? Ahoana ny fomba hisafidianana?
avy amin'ny admin tamin'ny 21-03-19
Ho an'ny trano fandraisam-bahiny, ny fitantanana ny fitaovana fanadiovana dia ampahany lehibe amin'ny fitantanana ny efitrano fandraisam-bahiny. Tsy mifandraika amin'ny tombony ara-toekarena ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny fotsiny izany, fa koa fepetra fototra iray mba hiantohana ny fizotran'ny asa-trano. Karazan-fitaovana fanadiovana inona no ao amin'ny hotely ...
Ny fandalinana SWOT an'ny mpilalao lehibe eo amin'ny tsenan'ny mpanadio banga indostrialy toa ny Delfinvacuums, RUWAC INDUSTRIESAUGER GMBH, ny vahaolana vakum'ny RGS, sns.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tatitra momba ny fikarohana eny amin'ny tsena madio kokoa ny indostria, ny fikambanana dia afaka mahazo fampahalalana manan-danja momba ny mpifaninana, ny fanovana ara-toekarena, ny demografika, ny fironana eo amin'ny tsena ankehitriny, ary ny toetran'ny fandaniam-bolan'ny mpanjifa. Ity tatitra momba ny varotra manerantany ity dia manolotra vahaolana fikarohana amin'ny tany tena ...
Ity no mpandresy amin'ny loka 2021 "Clean Home" 2021
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-03-17
Ny mpampanonta anay dia nanandrana «spray», famafana, mpanadio ary fitaovana vaovao an-jatony. Ny vokatra tsy maintsy anananay: vokatra izay sady mora ampiasaina no mahery. Bonus isa ho an'ny fiarovana sy ny fisakaizana amin'ny planeta. Ny nomerao tamin'ny 1964 an'ny "Better Homes & Gardens" dia mivaky toy izao: "Tsy ny fikarohana rehetra no ...
Tafio-drivotra mahery vaika any Mongolia no namoizana ain'olona 6 ary 80 no tsy hita
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-03-15
Vaovao momba an'i Darima Basil / CCTV Tamin'ny marainan'ny 15 martsa, ora teo an-toerana, dia nanambara ny fitantanan-draharaham-panjakana misahana ny toe-javatra vonjy taitra ao Mongolia fa ny harivan'ny faha-13 ka hatramin'ny 9 maraina tamin'ny faha-15 dia totalin'ny mpiandry omby 548 avy amin'ny faritany 9 no voalaza fa tsy hita tao amin'ny tafio-drivotra manerana ny firenena ...
Tsy nahomby intsony ny freins! Nianjera tamin'ny arofanina i Tesla, taorian'ny fanandramana amidy ihany koa! Farany: malama ny tany!
Tamin'ity faran'ny herinandro ity dia tsy nahomby indray ny freins-n'i Tesla, ary toa mampihomehy. Toy izao ny tantara: ny tompona Tesla iray, tsy afaka nanitsaka ny vakiny, dia niditra tao amin'ny lohan'ny fiara aloha, ary avy eo nangataka fanampiana tamin'ny serivisy aorinan'i Tesla. Na izany aza, tsy nino azy ny mpiasan'ny Tesla ary nanandrana ...
Nitrangana haintrano tamina tranobe malaza iray tany Shijiazhuang
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-03-10
Tamin'ny 11 ora maraina teo no niseho ny afo tao amin'ny akora fanamafisana ny rindrina ivelany an'ny tranoben'i Zhongxin, miorina eo amin'ny zorony atsimo atsinanan'ny fihaonan'i Jianshe Dajie sy ny làlana Fanxi ao amin'ny tanànan'i Shijiazhuang, faritanin'i Hebei. sy sampana hafa ...
Miakatra ny vidim-bokatra any Shina
avy amin'ny admin tamin'ny 21-03-09
Ny valan'aretina dia nitarika ho amin'ny famokarana malemy ny famokarana eran'izao tontolo izao sy ny famatsiana fatratra ny akora. Ny haavon'ny sanda amin'ny fitrandrahana an-tsambo any Shina, tsy misy vy, fitrandrahana arintany ary fanasana dia mbola ambany kokoa noho ny sanda indostrialy nampiana. Ny indostrian'ny famokarana indostrialy voalohany sy ny ...
Zavatra 5 tadiavina rehefa misafidy mpanadio karipetra
avy amin'ny admin tamin'ny 21-03-08
Taloha, ny karipetra shampooing dia tsy tian'ny olon-drehetra. Na izany aza, na iza na iza manana karipetra na karipetra mitovy habe amin'ny efitrano iray aza dia hiaiky fa io raharaha tsy misy dikany io ary indraindray tsy mahavita inona dia tsy maintsy alamina mandra-tara loatra. Miampy ny zava-misy fa ny milina sokajy varotra ...
Ny satan'ny ankehitriny sy ny fomba fijerin'ny tsenan'ny famolahana marbra manerantany amin'ny taona 2020 - Husqvarna, Indutrade (Scanmaskin), HTC Group, Xingyi Polishing, Xtreme Polishing System
avy amin'ny admin tamin'ny 21-03-05
MarketsandResearch.biz dia namoaka tatitra fikarohana farany momba ny tsenan'ny fitotoana marbra manerantany tamin'ny taona 2020, izay misy ny mpamokatra, ny faritra, ny karazana ary ny fampiharana ary ny vinavinan'ny taona 2025. Ity dia ho tombana amin'ny tsena manerantany ary fanombanana feno ary famakafakana mavitrika. U ...
Tsenan'ny milina fitotoana marbra eran-tany 2020 Status sy Outlook - Husqvarna, Indutrade (Scanmaskin), HTC Group, Xingyi Polishing, Xtreme Polishing Systems
avy amin'ny admin tamin'ny 21-03-04
MarketsandResearch.biz dia nanambara fanadihadiana vaovao momba ny tsenan'ny Global Marble Floor Grinding Machine 2020 nataon'ny mpanamboatra, ny faritra, ny karazana ary ny fampiharana, ny vinavina hatramin'ny 2025 izay natao ho antontan-taratasy manampy amin'ny fanombanana ny tsena manerantany miaraka amin'ny tomban'ezaka feno sy. ..
Miady amin'ny COVID-19
Tamin'ny volana Janoary 2021, niely ny COVID-19 tao Shijiazhuang City, faritanin'i Hebei, Sina. Betsaka ny olona voany. Nanomboka tamin'ny 6 Janoary, nakatona tanteraka i Shijiazhuang noho ny fisorohana ny valanaretina ao an-trano. Ny mponina rehetra dia manana andrana asidra niokrika isaky ny telo andro, ary olona avy amin'ny provin hafa ...
Ny indostrian'ny fampiasana farany dia hampiakatra ny tsenan'ny fanaovan-jiro marbra ato ho ato
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-02-22
Ny orinasam-pikarohana mpivarotra haingam-pandeha haingam-pandeha UpMarketResearch dia namoaka tatitra momba ny tsenan'ny fitotoana marbra. Ny tatitry ny tsena dia manome sehatra ho an'ny tsena amin'ny ankapobeny, ao anatin'izany ny famatsiana sy ny fangatahana amin'ny ho avy, ny fanovana ny fironana amin'ny tsena, ny fahafaha-mitombo avo lenta ary ny fanadihadiana lalindalina ny tsena ho avy ...
Rehefa manakaiky ny 500K ny maty amerikana dia nilaza i Dr. Anthony Fauci fa mety nanao sarontava ny Amerikanina tamin'ny 2022: Vaovao farany COVID-19
Amerikanina maherin'ny 90000 no mety maty noho ny antony mifandraika amin'ny COVID-19 amin'ny 1 Jona, hoy ny andrim-panjakana malaza. Tonga ny vinavina satria manantena ny Etazonia fa mihoatra ny 500000 ny maty ao anatin'ny roa andro. Rehefa mifarana ny areti-mandringana dia mbola mistery ihany. Nilaza ny Dr. Anthony Fauci fa & ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-12-31
Zavatra 5 tadiavina rehefa misafidy mpanadio karipetra taloha, ny karipetra shampoo dia tsy tian'ny olon-drehetra. Na izany aza, izay manana karipetra na karipetra mitovy habe amin'ny efitrano iray aza dia hiaiky fa io raharaha tsy misy dikany io ary indraindray tsy mahavita inona dia tsy maintsy alamina ...
Ahoana ny fitazonana ny gorodona gangstone artifisialy mall?
Ny granita artifisialy dia karazan-kazo marbra voajanahary sy vovoka vato ho akora fototra. Azo haingoina amin'ny mosaic, akorandriaka, vera ary fitaovana hafa koa izy io. Mampiasa resina biolojika izy io ho toy ny mpandrendrika simenitra, fikolokoloana banga, hozongozona mafy, ary avy eo dia sitrana amin'ny hafanan'ny efitrano. Sy ...
Zava-dehibe ny fiarovana ny fananganana fikarakarana vato!
Ny lozam-pifamoivoizana dia nitranga matetika tato anatin'ny taona vitsivitsy, ka niteraka fahavoazana lehibe ho an'ny mpiasa mpanao fananganana. Tsy misy indostria maningana. Ny fahalalana fototra momba ny fananganana fiarovana dia takiana mba hiantohana ny asa azo antoka. 1. Fampiasana herinaratra azo antoka 1. Isaky ny miditra amin'ny tranokala fanamboarana ianao ...
Care Fikarakarana vato】 Fahaiza-miasa sy fitandremana ho an'ny fitsaboana etikety!
1: Ny vovoka, fasika ary tasy amin'ny vato dia tsy maintsy diovina alohan'ny fananganana. 2: Mampiasà taratasy masking, sarimihetsika plastika ary fitaovana hafa hamehezana ny vatofantsika vy, fanaka sy haingon-trano ary fanaka hafa. 3: Amin'izao fotoana izao, ny masinina vita amin'ny krystaly ampiasaina amin'ny fikojakojana vato dia cen ...
Antony, fisorohana ary fitsaboana ireo toerana misy rano vato
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-12-11
"Toerana misy rano" dia antsoina hoe "homamiadana" amin'ny indostrian'ny fikarakarana vato. Ny antony dia rehefa misy faritra misy rano ilay vato dia sarotra ny manasitrana. Amin'ny tranga henjana dia azo voaheloka ho faty mihitsy aza. Ny toerana misy rano dia miseho amin'ny granita (fantatra amin'ny anarana hoe "granite"). Noho ny...
Mba hanatsarana ny haavon'ny fikolokoloana vato, ny tompona, ny orinasa fitantanana fananana ary ny orinasa mpanadio dia tsy maintsy mandeha amin'ny làlana roa!
Amin'izao fotoana izao, ny haingo-bato dia miha mazàna ampiasaina amin'ny toerana ara-barotra sy ampahibemaso isan-karazany toy ny hotely, tranobe misy birao, toeram-pivarotana, seranam-piaramanidina ary gara lalamby haingam-pandeha, indrindra ho an'ny haingo avo lenta. Marbra voajanahary no saika safidy voalohany. Koa satria avo ny vato voajanahary ...
Raharaha mila fiheverana amin'ny fanadiovana karipetra amin'ny ririnina
Ho avy tsy ho ela ny ririnina, midika izany fa maro amintsika no hijanona ho mafana ao an-trano. Mba hahatonga ny tranonao hahatsapa ho madio sy mahazo aina, tonga ny fotoana anaovan-tànana fonon-tànana fanadiovana sy fanatanterahana asa sasany. Manomboka amin'ny vovoka amin'ny karipetra ka hatrany amin'ny ambainy fanadiovana lalina, ny fomba fanadiovana ririnina tsara dia hanampy anao ...
Ahoana ny fomba famolavolana programa fikolokoloana hitazomana ny gorodon-vatoo ho fanamboarana tsara sy ho toa vaovao.
Ny gorodona vato dia matanjaka sy mateza, manampy singa famolavolana tokana amin'ny sehatry ny varotra. Mba hitazomana azy ireo hanamboatra tsara sy hahatonga azy ireo ho vaovao, dia ilaina ny fampiharana drafitra fikojakojana mahomby. Manomboka amin'ny fahazoana ny vato ka hatramin'ny fandraisana ny teknikan'ny poloney efa hatry ny ela, ...
Ny areti-mandringana COVID-19 dia nitondra fampandrenesana maika ny indostrian'ny fanadiovana sy ny vahoaka momba ny lanja sy ny maha-zava-dehibe ny fisorohana ny fielezan'ny mikraoba mikraoba.
Ny areti-mandringana COVID-19 dia nitondra fampandrenesana maika ny indostrian'ny fanadiovana sy ny vahoaka momba ny lanja sy ny maha-zava-dehibe ny fisorohana ny fielezan'ny mikraoba mikraoba. Hoy i Griffin: "Taloha izahay dia te hilaza fa ny fanadiovana dia natao ho an'ny fahasalamana, saingy tsy afaka manaporofo izany velively ....